Akụkọ - Kedu okwu ndị a ga-atụle mgbe ịkpụzi usoro akpaka na-akpaghị aka?
1. Nhọrọ nke isi na inyeaka nke usoro mmepụta nke ịkpụzi ụlọ ọrụ na nhazi nke usoro mmepụta. Typedị ihe dị iche iche nke kachasị emetụtakarị n'ụdị ihe atụ, dịka ájá ụrọ nkịtị, ájá sodium silicate na ájá resin; nhazi usoro nyocha; ụdị ngwaahịa ndị e ji ígwè mee, dị ka ihe nkedo na nkedo ígwè; Nkedo size na chọrọ maka obi jụrụ usoro oge; mgbatị mmepụta mma na izi ezi nwere ike metụta ihe ndị dị ka chọrọ.
2. Thedị, nkọwapụta na arụmọrụ nke igwe na-akpụzi bụ ihe ndị dị mkpa na-emetụta wiring nke usoro mmepụta. Ọmụmaatụ, ma iji nkịtị ịkpụzi igwe ma ọ bụ a static mgbali ịkpụzi igwe, ma ọ bụ otu igwe ma ọ bụ a unit nzukọ akara, arụpụtaghị, arụzi ụgbọala na akpaaka, wdg, nke na-ekpebi nhọrọ nke inyeaka igwe na layout nke mmepụta akara.
3. Usoro ọrụ na njikwa nke usoro mmepụta ga-emetụta ụdị nhazi ụdị nke igwe inyeaka na usoro mmụta nhazi nke usoro mmepụta, dịka ọmụmaatụ, na-aga n'ihu ma ọ bụ na-agafe.
4. Usoro nchịkwa na njikwa nke usoro mmepụta na izipu ngwaọrụ nke akara ngosi metụtara ya ga-emetụtakwa usoro nhazi nke mpaghara nke igwe enyemaka inyeaka na ndị na-ebufe ebu na ụdị ntinye nke usoro mmepụta.
5. Ọnọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe ndị metụtara nchekwa gburugburu ebe obibi na-emetụtakwa nhazi nke isi na igwe enyemaka. Ndozigharị nke ụlọ ọrụ ochie ga-enwe mmachibido dị iche iche a chọrọ maka nhazi nke usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ ihe atụ. Mgbe ụfọdụ, ihe achọrọ maka mgbochi uzuzu na mbenata mkpọtụ gburugburu ebe obibi na ogbako anyị ga-emetụtakwa nhọrọ nke igwe ndị isi na inyeaka. Dịka ọmụmaatụ, iji chịkwaa mkpọtụ ahụ, ahịrị mmepụta enweghị ike iji ịma jijiji, mana ịgba ụda.
Sandbox, Flask akpụzi Machine, Nkedo Nkedo Flask, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Flask Nkedo, Punch Out igwe,